Mpampianatra an-tserasera amin'ny filan-kevitra any an-tsekoly: ny fototra
Home » Lahatsoratra farany farany » Hostpost » Mpampianatra an-tserasera amin'ny filan-kevitra any an-tsekoly: ny fototra
Aprily 16, 2021
Namaky 14 aho
Ny mpanolotsaina any an-tsekoly dia ampahany manandanja lehibe amin'ny sehatry ny fampianarana rehetra, ary ity dia toerana tena mahafa-po sy sarotra ny manana.
Raha tianao ny manampy sy manohana olona, ​​ny miasa ho mpanolotsaina any an-tsekoly dia mety ho asa mety indrindra ho anao. Betsaka ny mari-pahaizana, fanamarinana ary fahazoan-dàlana mila ilainao alohan'ny hanombohanao ny asanao, ary ny tompona amin'ny Internet amin'ny torohevitra any an-tsekoly dia dingana lehibe amin'ny dia ataonao. Mety efa nahazo mari-pahaizana licence koa ianao ary mieritreritra ny dingana manaraka, na mety mikasa ny làlam-pianaranao ho tonga mpanolo-tsaina any an-tsekoly. Na aiza na aiza misy anao amin'ny làlan'ny asanao, ny masters an-tserasera amin'ny torohevitra any an-tsekoly dia afaka manolotra safidy fiofanana henjana ho anao izay malefaka sy mahomby.
Inona no atao hoe mpanolo-tsaina any an-tsekoly?
Ao anatin'ny sehatry ny torohevitra, misy karazana mpanolotsaina isan-karazany izay miasa amin'ny toerana samihafa sy amin'ny karazan'olona samihafa. Ireo mpanolotsaina any an-tsekoly dia miasa amin'ny toerana fanabeazana isan-karazany, ary manohana ireo mpianatra amin'ny sehatra samihafa ao anatin'izany ny tanjon'izy ireo sy ny olany manokana. ny tompony an-tserasera amin'ny filankevitry ny sekoly dia hanampy anao hanomana ny fanadinana fahazoan-dàlana, izay takiana aminao alohan'ny alohan'ny ahafahanao manao ho mpanolotsaina any an-tsekoly. Miovaova ny fanadinana arakaraka ny fanjakanao, noho izany dia ilaina ny maka antoka fa handinika izany ianao rehefa mieritreritra ny toerana hampiasanao fampiharana.
Amin'ny ankapobeny dia misy karazana torohevitra telo lehibe atolotra any an-tsekoly:
Toro-làlana fitarihana - ity dia fantatra ihany koa amin'ny hoe mpanoro hevitra na mifantoka amin'ny mpanolotsaina. Tafiditra ao ny mpanolo-tsaina manana anjara toerana mavitrika kokoa noho ny mpanjifa, noho ny fahaizan'ilay teo aloha mahay kokoa. Ny ezaka rehetra dia mifantoka amin'ny olan'ny mpanjifa.
Torohevitra tsy mivantana - ity dia karazana toro-hevitra izay tsy anoloran'ny toro-hevitra toro-lalana ary mifantoka kokoa amin'ny mpanjifa. Ny mpanjifa no mitarika ny habaka sy ny atin'ny fiovam-po.
Torohevitra eclectic - ity dia fitambaran'ny toro-hevitra mivantana na tsy mivantana, izay tsy mavitrika toy ny taloha intsony ny mpanolotsaina, fa tsy dia mandefitra toa ny farany. Fomba maro karazana sy malefaka io.
Ny tompo an-tserasera amin'ny filan-kevitra any an-tsekoly dia afaka manampy anao hampivelatra ny fahatakaranao ireo karazana torohevitra sy ireo fomba isan-karazany. Misy ny modules amin'ny psikolojia tsy ara-dalàna, ny toro-hevitra ao amin'ny vondrona ary ny toro-hevitra amin'ny kolontsaina marobe, ary koa ny fiofanana sy toeram-ponenana. Ny tompo an-tserasera amin'ny filankevitry ny sekoly dia manambatra ny asa azo ampiharina amin'ny asa an-tserasera, ahafahanao mampihatra ny fahaizanao sy ny fahalalanao vaovao any am-piasana, manao fifandraisana eo amin'ny indostria ary mianatra mora foana avy any an-trano.
Mety ho lasa mpanolo-tsaina amin'ny sekoly fanabeazana fototra ianao amin'ny fanampiana ireo mpianatra amin'ity dingana lehibe mampivoatra ny fiainany ity. Ity koa dia mety ho fotoana hanjary mazava kokoa ny tsy fetezana mianatra na eritreritra tsy mifandrindra, ary koa ny olan'ny tena manokana na ny fianakaviana. Amin'ny sekoly fanabeazana fototra dia mianatra mifampiresaka sy mifanerasera amin'ny hafa ny mpianatra. Ireo mpanolotsaina any amin'ny ambaratonga voalohany dia afaka manampy ny ankizy amin'izany sy maro hafa ary koa afaka manao referrases amin'ireo matihanina hafa ho an'ny fitsaboana na fanohanana fanampiny.
Ireo mpanolotsaina any amin'ny lisea koa dia mitana anjara toerana lehibe satria io fotoana io dia misy ny fihenjanana ara-pianarana sy ho an'ny mpianatra manokana. Azonao atao ny manampy ny mpianatra hampivelatra ny tetikadin'izy ireo amin'ny dingana manaraka amin'ny fanabeazana na ny asa aman-draharaha, ary koa ny fanomezana fanohanana misy olanao manokana. Amin'ny sekoly ambaratonga faharoa dia mbola mahita sy mametraka ny mombamomba azy ireo ny mpianatra ary ireo mpanolotsaina any an-tsekoly dia afaka manampy azy ireo hiomana ho tonga olona mahomby sy feno fahafaham-po raha vao nandao ny lisea izy ireo.
Mety aminao ve izany?
Mila karazana olona iray ianao ho tonga mpanolo-tsaina tsara, ary mila mampiasa fitambaran'ny fahalalanao akademika sy ny fahaizanao manokana sy ny toetranao manokana ianao. Ireo mpanolotsaina dia mpihaino tsara tokoa izay mahay mametraka ny toerany eo amin'ny toeran'ny mpanjifany, mba hahafantarany ny zavatra tsapany. Mila mandamina tsara koa ianao, afaka manombana, mandrindra ary manombatombana ary ho sariaka sy mora hatonina. Ny mpanolotsaina any an-tsekoly koa matetika dia manome lesona momba ny lohahevitra toa ny fanararaotana, ka afaka manampy amin'ny fananana traikefa amin'ny fampianarana na fanaovana kabary ampahibemaso. Ary koa ny fahaiza-manao teknika izay hampianarin'ny tompon'ny Internet amin'ny toro-hevitra any an-tsekoly anao, misy toetra marobe manokana izay mahatonga ny mpanolo-tsaina tsara any an-tsekoly.
Fifandraisana - ity dia ampahany lehibe tsy mampino amin'ny torohevitra. Hiara-hiasa sy hiresaka amin'ny olona marobe ianao, miaraka amin'ny olana sy filàna samihafa. Mila mahay mampifanaraka ny fomba fifandraisanao sy ny teknika arak'ilay olona ianao. Ilaina ihany koa ny fahazoana endrika fifandraisana tsy am-bava toy ny fitenin-tena, satria izany dia afaka milaza betsaka aminao momba ny olona iray sy ny fahatsapany.
Fiaraha-miasa - hiara-miasa amin'ny olona maro samihafa ianao, manomboka amin'ny mpikambana ao amin'ny sekoly ka hatramin'ny mpitsabo ara-pahasalamana ary mpiasa sosialy, noho izany dia mila mahay miara-miasa ianao mba hahitana ny vahaolana tsara indrindra ho an'ny mpianatrao. Tonga eto an-toerana ihany koa ny fifandraisana, satria mila mampifanaraka ny fomba firesakao sy mandefa vaovao amin'ny hafa koa ianao, satria mety tsy manana ambaratonga mitovy amin'ny fahalalanao torohevitra toa anao izy ireo.
Fiaraha-miory - ity no fahaizana mametraka ny tenanao amin'ny kiraron'ny mpianatrao hanandrana sy hahatakatra izay tsapany. Hanana traikefa be dia be ianao, saingy tsy azo inoana fa hanana traikefa voalohany ianao amin'ny toe-javatra rehetra entin'ny mpianatra aminao. Ny fiaraha-miory dia afaka manampy anao hahita an'izao tontolo izao amin'ny fomba fijerin'ny mpianatrao.
Organisation - ny karazana mpanolotsaina rehetra dia tokony ho voarindra tsara. Amin'ny maha mpanolo-tsaina anao any an-tsekoly dia hanana mpanjifa marobe ianao ary mila miantoka ny fitondranao ny tsirairay amin'ny haavon'ny fiheverana sy ny matihanina. Mety ho hitanao koa fa mampianatra kilasy momba ny lohahevitra toy ny herisetra sy ny fidorohana zava-mahadomelina ianao, ka mety mila mandrafitra ireo lesona ireo manodidina ny fandaharam-potoananao ianao.
Ny asan'ny mpanolotsaina any an-tsekoly dia mety miovaova be arakaraka ny filan'ny mpianatra tohanany. Hodinihinao ny fahaiza-manao, tanjona, fahalianana, fahalemena ary tanjaky ny mpianatra ary ampio izy ireo hisafidy ny kilasy mety indrindra amin'izy ireo. Mety ho tompon'andraikitra amin'ny fikarakarana ny fandaharam-potoanan'ny kilasy misy anao koa ianao. Ary koa ny fanampiana akademika, ianao dia hanampy azy ireo amin'ny olana ara-pihetseham-po, ara-tsosialy, fitondran-tena sy ara-tsaina mety hatrehin'izy ireo. Izany dia mety miainga amin'ny famaritana sy fanaovana tatitra fanararaotana na fanaovana tsirambina, hatramin'ny fiatrehana ny asan-dahalo, zava-mahadomelina na alikaola. Azonao atao ihany koa ny manondro ireo mpianatra sy ray aman-dreny amin'ireo matihanina hafa ho fanampiana bebe kokoa sy fanampiana.
Ahoana no hahatongavanao ho iray?
Ny làlana mahazatra ho tonga mpanolotsaina any an-tsekoly dia misy ny mari-pahaizana licence amin'ny toro-hevitra na lohahevitra mifandraika toy ny psikolojia na ny fanabeazana. Matetika ny mpampianatra dia tonga mpanolo-tsaina any an-tsekoly, satria efa manana ny fahaiza-manao takiana izy ireo, toy ny fahaizana mampianatra sy ny filan'ny nofo hanohanana ny tanora. Amin'ny faritra sasany dia ny mari-pahaizana bakalorea no takiana farafahakeliny, fa amin'ny sasany kosa mila mari-pahaizana master ianao. Ity no ahafahan'ny tompo an-tserasera amin'ny filan-kevitra any an-tsekoly manampy amin'ny fampivoarana ny asanao. Raha vantany vao manana ny mari-pahaizana marina ianao dia mila mandalo ny fanadinana fahazoan-dàlana alohan'ny hanombohana ny asanao.
Ny tompo an-tserasera amin'ny filan-kevitra any an-tsekoly dia manolotra fotoana mety ho an'ny fiofanana sy toeram-ponenana, izay fomba tsara hampiasana ny fahalalanao sy ny fahaizanao amin'ny fampiharana ary hahazo traikefa asa azo ampiharina. Izy ireo koa dia fomba mamirapiratra ahafahana mifandray sy mahazo fifandraisana amin'ny indostria, ary maro ny olona mety hiafara amin'ny asa ho an'ny orinasa na olona tadiavin'izy ireo. Mihabetsaka ny isan'ny mpianatra misoratra anarana amin'ny fianarana, midika izany fa mitombo ihany koa ny filan'ny mpanolotsaina any an-tsekoly.
Ankoatr'izay, misy tombony betsaka amin'ny fianarana amin'ny ambaratonga ambony. Hanana fidirana amin'ny fahalalana, loharano ary traikefa izay mety tsy ho azonao amin'ny fomba hafa. Ny mari-pahaizana amin'ny ambaratonga maoderina dia hanampy anao hisongadina ao anatin'ny vondron'ireo mpangataka asa afaka manampy anao hahazo asa avo lenta sy hampitomboana ny karama. Azonao atao ihany koa ny misafidy ny hanohy ny fianaranao amin'ny ambaratonga PhD raha vantany vao nahavita ny mari-pahaizana master ianao.
Fa maninona no mianatra amin'ny Internet?
Ny tompo an-tserasera amin'ny filan-kevitra any an-tsekoly dia tsy vitan'ny hoe hanome anao fahaiza-manao lalina sy fahalalana mifandraika amin'ny asan'ny mpanolo-tsaina, fa afaka manampy amin'ny fampivelarana ny fahaizanao manokana koa. Ny fahaiza-manao malemilemy dia andiana fahaizana manokana tsy azo ovaina manokana izay afaka manampy anao hisongadina sy hahomby amin'ny sehatry ny asa. Anisan'izany ny fahaiza-manao toy ny serasera, ny fiaraha-miasa, ny famoronana, ny famahana olana ary ny fanentanana ny tena. Na dia fahaizana ilaina amin'ny indostria rehetra aza ireo dia ilaina manokana ho an'ny mpanolotsaina ny sasany.
Rehefa mianatra an-tserasera ianao dia hanana fotoana hahafahana mampivelatra ny maro amin'ireo fahaiza-manao ireo rehefa mandresy ireo fanamby tsy manam-paharoa ateraky ny fianarana an-tserasera. Mila milamina tsara ianao, indrindra raha mianatra miaraka amin'ny andraikitra sahaninao na fianakavianao ianao. Ny fahafahanao manentana ny tenanao hamita ny fianaranao amin'ny ambaratonga avo dia afaka manome anao fianarana be dia be sy fahazarana miasa hampiasaina amin'ny ho avy, toy ny fandaharam-potoana, mametraka tanjona ary manala ireo fanelingelenana. Mandritra ny fandalinanao dia hiasa amin'ireo fahaiza-manao ireo foana ianao, ary mety ho hitanao fa efa manana ny maro amin'izy ireo ianao, saingy azo ovaina sy hatsaraina ihany koa izy ireo. Amin'ny sehatry ny tafa sy dinika dia azonao atao ny manome ohatra azo ampiharina rehefa nampiasa ireo fahaiza-manao malefaka ireo ianao mba hampiaiky volana ny mpampiasa anao. Ny fahaizanao sy ny fahaizanao mitantana fotoana dia tena zava-dehibe rehefa mianatra ao an-trano, satria mila mahazo antoka ianao fa mianatra mahomby sy mitantana ny fanelingelenana, fa tsy ao amin'ny kilasy ara-batana na miaraka amina tutor any hanara-maso anao.
Tsy dia misy dikany firy koa ny toerana misy anao rehefa mianatra Mazava ho azy amin'ny Internet ianao. Raha toa ka tsy manolotra ny làlana na ny haavon'ny mari-pahaizana ilainao ny andrim-panabeazana eo an-toerana dia mety hampihena ny fahaverezan'ny drafitry ny asanao izany. Mety hahatonga anao tsy maintsy mandalina zavatra hafa izany, na tsy misy mihitsy. Rehefa mianatra lavitra, dia afaka mahazo fanabeazana amin'ny andrim-panjakana maro samihafa, avy ao an-tranonao. Ny tompo an-tserasera amin'ny filan-kevitra any an-tsekoly dia mahatonga ity ambaratonga fanabeazana ity ho mora azo amin'ny olona maro kokoa.
Ny tompo an-tserasera amin'ny filan-kevitra any an-tsekoly dia mety ho safidy lafo vidy kokoa ihany koa raha resaka fanabeazana nobeazina. Ny iray amin'ireo antony lehibe mahatonga ny olona tsy hanohy fanabeazana bebe kokoa dia satria mety ho lafo be izy io, ary noho izany, tsy mora tohina ara-bola. Matetika no mora kokoa ny fampianarana an-tserasera noho ny namany mifanatrika aminy. Azonao atao ihany koa ny manangona vola rehefa mianatra any an-trano satria tsy mila miahiahy be momba ny fitadiavana trano, na akaikin'ny, campus, na koa tsy mila mandeha isan'andro. Misy ihany koa ny fahaizana mifehy bebe kokoa amin'ny fomba fianaranao sy ny tontolo iainanao, izay mety hahatonga ilay traikefa hahafinaritra sy hampanan-karena anao kokoa. Ny fianarana avy any an-trano dia fotoana lehibe iray hampiasana izay karazana mpianatrao, ary koa hampivelatra fahazarana izay afaka manampy anao handray vaovao vaovao isaky ny mila mianatra zava-baovao amin'ny ho avy ianao.
Ny fahatongavana ho mpanolo-tsaina any an-tsekoly dia dingana iray mitaky fitakiana henjana izay mitaky fahaizana sy fahalalana manokana eo amin'ny lafiny teknika sy manokana. Izy io koa dia manome valisoa lehibe sy manan-danja tokoa, satria ny sekoly dia fotoana mikorontana be ho an'ny mpianatra marobe, ary ny mpanolotsaina any an-tsekoly dia manome fanampiana sy fikarakarana sarobidy ho an'ny maro. Ity dia anjara asa samy hafa izay hampiasa ny fahalalanao ara-teknika sy ny fahaizanao manokana mba hanampiana anao hanome ny haavon'ny fanohanana tsara indrindra. Ny tompo an-tserasera amin'ny filan-kevitra any an-tsekoly dia fomba tsara hanohizanao ny dianao mpanolo-tsaina na hiova ho asa amin'ny toro-hevitra amin'ny sekoly. Mahomby sy mora vidy ary mamela anao hianatra amin'ny dianao manokana miaraka amin'ireo fanoloran-tenanao taloha toy ny asa na fianakaviana.
Ankehitriny ianao dia manana olana lehibe tokony hodinihinao rehefa manombana ny làlana mankany amin'ny mpanolo-tsaina any an-tsekoly.
Schauinsland Reisen dia mitantana orinasa fiaramanidina miaraka amin'ny ...
Nanjary mafy ny paradisa fizahan-tany Indoneziana Bali ...
Qatar hanokatra hotely vaovao miisa 100 ho an'ny FIFA 2022 World ...
Kiribati dia mihidy ny sisin-tany fa ny fampiantranoana fandraisam-bahiny ...
Nisy mahery fo fizahantany vaovao nipoitra avy tany Albania
Hetsika Grand Dama Grand Dama voalohany miaraka amin'ny antsantsa sy ...
Fiatoana tanàna kely indrindra sy mora vidy indrindra eto an-tany
India Aviation: New Airlines eo amin'ny Horizon
Fampitandremana momba ny dia lavitra amerikana, saingy mbola tsara kokoa ao amin'ny ...
Ny seranam-piaramanidina lehibe indrindra ao Tibet dia manomboka miasa
Sandals Royal Bahamian: fanavaozana bebe kokoa ho an'ny rendrarendra ...
Taliban: Ny vahiny ihany no afaka mandao an'i Afghanistan avy ...
Ny filoham-pirenena Haiti sy ny Ramatoa Voalohany novonoina tamin'ny fanafihana ny ...
Milamina ve any Paris miaraka amina hetsi-panoherana mahery vaika sy COVID?
Hamehezana fehikibo na fantsom-pifandraisana: Fiarovana fiaramanidina vaovao ...
Lufthansa dia mandefa Airbus A321 roa maharitra ...
Famelomana indray ny fizahan-tany any Italia: Fanantenan'ny post-pandemika vaovao
Nanaiky ny fizahantany COVID-19 ny fanjakana afrikanina atsinanana ...
Ahoana no ahafahan'ny Amerikanina mandeha any Canada amin'ny lalàna vaovao?